15 Shaqooyinka Sawir -qaadista ee Ugu Lacag Badan | Dib -u -eegista 2022 | Talooyin
Bogga ugu weyn 15 Shaqooyinka Sawir Qaadashada Ugu Sareysa | Dib u eegista 2022
15 Shaqooyinka Sawir Qaadashada Ugu Sareysa | Dib u eegista 2022
Farxadda ah in aad si ka duwan wax ugu arki karto muraayadda kamarada waa in ay ku filnaataa in qofka xamaasadiisa lagu huriyo, laakiin dhammaanteen waan ognahay taasi gabi ahaanba run maaha. Dakhliga had iyo jeer waa jiraa sababtoo ah dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan noolaano inta aan sameyneyno waxaan ku raaxaysaneyno.
Sawir -qaadistu waxay is -beddeshay sanadihii la soo dhaafay si fudud sawirro looga qaaday madow iyo caddaan illaa hadda loo baahan yahay xirfado kala duwan oo dheeri ah sida tafatirka, fiidiyaha, iyo waxyaabo kaloo badan.
In kasta oo nooc kasta oo sawir qaadis ah uu kasban karo kumanaan doollar, haddana waxaa jira shan iyo toban shaqooyin sawir qaadis ah oo dhaqaale ahaan faa'iido badan leh. Ku soo biir markaan marayno liiskayaga shaqooyinka sawir qaadista ee ugu mushaharka badan/mushaharka badan sanadka 2022.
Sawir gacmeedku miyuu yahay Shaqo Wanaagsan?
Sawir qaadashadu waa xirfad cajiib ah sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho kartidaada, la kulanto dad badan oo xiiso leh.
Waxay ku geyneysaa meelo badan oo xiiso leh; waxay ku siinaysaa xoogaa xakamayn ah, waxayna si fiican u bixisaa. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku dadaasho sidii ay taasi u dhici lahayd oo aad sii wadato inaad barato xirfadaha looga baahan yahay inaad ku sii jirto.
Akhri: 10ka Sawir -qaade ee ugu mushaarka badan 2022
Sawir qaadayaashu Lacag Ma Sameeyaan?
Sida laga soo xigtay ZipRecruiter, 'laga bilaabo Luulyo 12, 2021, celceliska lacagta billaha ah ee Sawir -qaadaha Mareykanka waa $ 3,593 bishii.
Si kastaba ha ahaatee, celceliska mushaharka sawir qaaduhu wuu kala duwan yahay (ilaa $2,000), taasoo tusinaysa inay jiri karaan fursado badan oo horumarin iyo mushahar kordhin ku salaysan heerka xirfadeed, goobta, iyo sannadaha waayo-aragnimada.'
Natiijo ahaan, jawaabtaydu waxay noqon doontaa haa!
Sawirqaadayaashu waxay sameeyaan lacag, in badan oo ka mid ah waxaa lagu go'aamiyaa heerka xirfadooda, goobta, iyo sannadaha waayo-aragnimada.
Sidee sawir qaadayaashu lacag u helaan?
Waxaa jira siyaabo badan oo lacag looga sameeyo sawir qaadista. Waad iibin kartaa daabacaadaha, bilaabi kartaa baloog, la wadaagi kartaa shaqadaada warbaahinta bulshada, ku tartami kartaa tartamada sawirrada, bixin kartaa sawirro ama adeegyo dib -u -hagaajin, ama baro.
Waxaad lacag ka samayn kartaa xirfadahaaga sawir qaadista iyadoo ku xiran shakhsiyaddaada iyo danahaaga.
Dambe ee qoraalkan, waxaan ku tusi doonaa shaqooyinka sawir qaadista ee ugu mushaarka badan.
Intee in le'eg ayay sameeyaan sawir qaadayaasha caadiga ah iyo maxay sawir -qaadeyaashu ka kasbadaan gobol kasta oo Ameerika ah?
Sida laga soo xigtay runtii.com, sawir qaade caadi ah oo ku nool Mareykanka wuxuu sameeyaa celcelis ahaan $ 43,000 sanadkii.
Halkan waxaa ah sida ugu dhakhsaha badan ee u kala qaybsanaanta inta sawir qaadayaasha ah ee kasbada gobol kasta oo Maraykanka ah.
Alabama: $ 16.82 saacadiiba
Arkansas: $ 17.80 saacaddii
Kaliforniya: $ 16.29 saacadiiba
Colorado: $ 14.63 saacaddii
Alaska: $ 24.21 saacadii
Arizona: $ 13.93 saacadiiba
Connecticut: $ 15.64 saacaddii
Delaware: $ 16.59 saacadiiba
Degmada Columbia: $ 20.56 saacaddii
Florida: $ 14.87 saacaddii
Georgia: $ 13.14 saacaddii
Hawaii: $ 15.21 saacadii
Idaho: $ 13.46 saacadii
Illinois: $ 12.83 saacaddii
Indiana: $ 18.03 saacaddii
Iowa: $ 13.87 saacaddii
Kansas: $ 15.37 saacadii
Kentucky: $ 16.73 saacadii
Louisiana: $ 14.76 saacadii
Maine: $ 43.38 saacaddii
Maryland: $ 13.77 saacadiiba
Nebraska: $ 32.87 saacaddii
Nevada: $ 13.72 saacadii
Massachusetts: $ 17.08 saacaddii
Montana: $ 12.78 saacadii
New Hampshire: $ 14.11 saacaddii
New Jersey: $ 15.23 saacaddii
North Carolina: $ 13.58 saacadiiba
Oklahoma: $ 11.72 saacadii
Waqooyiga Dakota: $ 16.63 saacaddii
Ohio: $ 14.37 saacaddii
New Mexico: $ 17.26 saacadiiba
New York: $ 17.00 saacadiiba
Oregon: $ 15.72 saacadii
Pennsylvania: $ 15.73 saacadii
Jasiiradda Rhode: $ 17.85 saacaddii
South Carolina: $ 12.99 saacadiiba
South Dakota: $ 20.60 saacadii
Tennessee: $ 14.73 saacaddii
Texas: $ 21.51 saacaddii
Utah: $ 15.42 saacadii
Vermont: $ 42.46 saacadii
Michigan: $ 17.41 saacaddii
Minnesota: $ 17.81 saacadiiba
Virginia: $ 14.59 saacadiiba
Washington: $ 20.77 saacaddii
West Virginia: $ 16.56 saacadiiba
Mississippi: $ 26.71 saacadii
Missouri: $ 14.24 saacadiiba
Wisconsin: $ 14.24 saacadii
Wyoming: $ 17.15 saacadii
Qiimayaashani way kala duwan yihiin iyadoo ku saleysan heerka xirfaddaada, goobtaada, iyo khibradaha sannadaha.
Waa maxay mushaharka xirfadle sawir qaade?
Mushaharka sannadlaha ah wuxuu u dhexeeyaa $98,500 ilaa $18,000, iyada oo inta badan mushaharka sawir qaadeyaashu ay hadda u dhexeeyaan $29,000 (boqolkiiba 25aad) ilaa $40,000 (Boqolkiiba 75aad), kuwa ugu sarreeya (boqolkiiba 90aad) waxay kasbadaan $55,000 gudaha Maraykanka.
Celceliska mushaharka sawir qaadaha xirfadlaha ahi wuu kala duwan yahay (ilaa $11,000).
15 ka mid ah Shaqooyinka Sawir -bixinta ugu Sareeya | 2022 Dib u eegid
Kuwani waa shaqooyinka sawir qaadista ee ugu mushaharka badan/mushaharka badan. Waxaa ka mid ah;
1 FARSAMADA PHOTO
A tifaftiraha sawirada wuxuu ka shaqeeyaa sawirrada ka dib markii la qaaday si loo hagaajiyo naqshadooda iyo rafcaanka aragga.
Tifaftireyaasha sawirrada qaarkood waxay u shaqeeyaan daabacaadaha sida joornaalada ama mareegaha, halka kuwa kalena ay yihiin kuwo iskood u shaqeysta.
Tafatirayaasha sawirku waxay inta badan isticmaalaan software khaas ah si ay u hagaajiyaan iftiinka, soo-gaadhista, midabka midabka, iyo goobaha kale ee saameeya sida sawirku u ekaado.
Tifaftiraha sawirku wuxuu qaataa qiyaastii $ 16.10 saacaddii celcelis ahaan sannadkii.
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka sawir qaadista ee ugu mushaarka badan.
Akhri: 15 Software -ka Tafatirka Fiidiyowga Bilaashka ah ee ugu Fiican ee loogu talagalay Android, PC -yada, macruufka, iyo Mac
2. Kaaliyaha Sawir qaadaha
Kaaliyaha sawir qaadaha wuxuu ka caawiyaa sawir qaadaha wax kasta oo ay u baahan yihiin ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib sawir qaadka.
Tan waxaa ka mid noqon kara in lala xiriiro macaamiisha si loo sameeyo ballamo sawir qaadis, istuudiyaha ballanta ama meelo kale oo lagu toogto, iyo gaadiid qalab sida iftiin dheeraad ah oo sawir qaade.
Kaaliyayaasha sawir qaadaha ayaa sidoo kale gacan ka geysan kara marxaladda tafatirka, u diyaarinta sawirrada macaamiisha leh horumarin dijital ah.
Kaaliyaha sawir qaadaha ayaa saacaddii qaata qiyaastii $ 14.33.
Stylist -ku wuxuu u sameeyaa dharka moodel ama maado isagoo u dooranaya dhar ay xirtaan inta lagu jiro sawir qaadista.
Waxay had iyo jeer ka shaqeeyaan sawir -qaadista joornaalada ama daabacaadaha moodada.
Stylists -ku waxay adeegsadaan aqoontooda moodada si ay u hubiyaan in qof kasta oo la sawirayo uu si sax ah u eegayo sida agaasimuhu u rabo inay u ekaadaan.
Mushaharka saacadlaha ah ee stylist -ku badanaa waa qiyaastii $ 14.80.
4. Wedding sawire
A aroos sawir qaade sawiro sawiro ka hor iyo inta lagu jiro aroosyada. Sawir qaadayaasha aroosku waxay ku dadaalaan inay sawir kasta ka dhigaan mid aan waarayn oo qurux badan, waxayna fahmayaan sidii ay maadooyinkooda ugu qabsan lahaayeen ficil ahaan.
Waxaa laga yaabaa inay qaataan sawirro cad ama ay dadka u sawiraan sawirro, iyo ururinta sawirrada oo dhan ayaa sida caadiga ah la habeeya arooska ka hor intaan loo gudbin macaamiishooda.
Sawir qaadaha arooska wuxuu qaataa qiyaastii $ 17.24 saacaddii.
5. wariye sawirqaade ah
Saxafiga sawir qaadaha ah waa qof sawir qaada oo u soo bandhiga si sheeko u sheegta. Waxay inta badan xoogga saaraan dhacdooyinka hadda jira ama kobcinta sheekooyinka wararka.
Saxafiyiinta sawir -qaadaha waxay abuuraan saamayn sheeko marka ay tafatiriyaan oo u diyaariyaan sawirradooda siyaabo gaar ah.
Dhab ahaantii, saxafiyiinta sawir -qaadaha ayaa laga yaabaa inay u shaqeeyaan sawir -qaade madax -bannaan, laakiin waxay kaloo ka shaqayn karaan daabacaadaha sida joornaalada iyo wargeysyada, iyo sidoo kale shabakadaha internetka ama telefishanka.
Saxafiga sawir qaadaha ah wuxuu qaataa celcelis mushahar sanadle ah $ 35,751.
Sidoo kale akhri: Immisa Weriye Ayaa Sameeya 2022 | Sharaxaad Shaqo Buuxa
6. Photo Retoucher
Sawir -qaadaha sawir -qaadaha wuxuu hagaajiyaa dhinacyada sawirrada dhijitaalka ah isagoo tafatirka iyo hagaajinta goobaha sawirrada.
Dib -u -hagaajiyeyaasha sawirku waxay inta badan ka shaqeeyaan warshadaha sida moodada, halkaas oo sawir kasta uu u baahan yahay muuqaal gaar ah.
Asal ahaan, waxay isticmaalaan softiweer si ay uga saaraan ciladaha, u fududeeyaan laalaabkii, iyo maaskaro wax ka beddelka jirka sida tattoos mawduucyada sawirada ay ku shaqeeyaan, marka lagu daro hagaajinta walxaha sida dhalaalka iyo midabka midabka.
Saacad kasta, sawir -qaadaha sawir -qaadaha wuxuu kasbadaa celcelis ahaan $ 18.69.
7. Farsameysanaha iftiinka
Farsamoyaqaanka iftiinka ayaa ka shaqeeya qayb ka mid ah shaqaalaha ama kooxda si ay u rakibaan, u habeeyaan, oo ay ugu shaqeeyaan qalabka iftiinka. Dejinta nalalka taagan si ay u kordhiso iftiinka qolka ama isticmaalka jel si aad u bedesho midabka qalabka iftiinka ayaa noqon kara tusaaleyaal tan.
Farsamayaqaannada iftiiminta ayaa sidoo kale ka shaqayn kara qaybaha filimka, dhacdooyinka, iyo soo saaridda masraxa.
Farsamayaqaanka nalalka wuxuu qaataa celcelis ahaan mushahar saacad ah $ 18.88.
8. Artist Farshaxan
Farshaxaniistaha qurxinta ee warshadaha sawir -qaadista ayaa naqshadeeya wuxuuna abuuraa qurxinta moodooyinka ama wuxuu dib -u -abuuraa raadinta qurxinta macaamiisha gaarka ah, sida aroosyada, oo sawirradooda la qaadayo.
Farshaxanada qurxiyo waxay si dhow ula shaqeeyaan stylists iyo timo-yaqaannada waxayna leeyihiin aqoon durugsan oo ku saabsan aragtida midabka, qalabka qurxinta, iyo sida loo isticmaalo qurxiyo siyaabo kala duwan oo kala duwan oo midabyo maqaarka ah.
Farshaxan -yahanno badan ayaa shaqaysta iskood u shaqaysta, laakiin qaar baa laga yaabaa inay u shaqeeyaan wakaaladaha ama saloonnada u shaqeeya kooxaha quruxda.
Farshaxaniiste is-qurxiya wuxuu qaataa qiyaastii $ 28.95 saacaddii.
9. Sawirqaadaha lacag la'aanta ah
Sawirqaade madax-bannaan ayaa maamula ganacsigooda sawir-qaadista oo kaliya wuxuu aqbalaa mashaariicda ay ku hamiyaan inay ku shaqeeyaan. Sawirqaadayaasha madax-bannaanida ayaa laga yaabaa inay ku takhasusaan mawduuc gaar ah, sida carruurta, xayawaanka rabaayada ah, ama sawirada qoyska.
Waxaa laga yaabaa inay leeyihiin istuudiyaha sawir -qaadista u gaar ah, ama waxay ku toogan karaan goobta.
Waxay caadi ahaan kasbadaan qiyaastii $ 36.71 saacaddii, taas oo ku xidhan xirfaddooda iyo tirada heesaha ay helaan, iyo arrimo kale.
Qaabku wuxuu u shaqeeyaa sidii mawduuca sawir-qaadista, isagoo soo bandhigaya alaabada sida dharka, qurxinta, dahabka, iyo agabka kale.
Moodooyinka sidoo kale waxay u shaqeyn karaan maaddooyin muuqaal ah oo loogu talagalay saxafiyiinta sawir-qaadista ee sheekooyinkooda sawir-qaadista. Wakaaladu waxay matashaa noocyo badan, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya moodada ama warshadaha ganacsiga.
Mushaharka saacad ee moodeelku waa qiyaastii $ 22.00.
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka sawir qaadista ee ugu mushaarka badan. Sidoo kale, ka akhriso qoraalka moodooyinka ugu mushaarka badan.
11. Sawir Commercial
Sawir -gacmeedku wuxuu ka kooban yahay sawirro loo abuuray suuq -geynta iyo ujeeddooyinka xayaysiinta, oo ka bilaabma tallaallo badeecad ilaa nuxur tifaftire oo buuxa!
Waxay leedahay niche kala duwan, mid walbana wuxuu soo saaraa dakhli u gaar ah.
Sawirqaadayaasha muusiga ganacsiga, tusaale ahaan, waxay abuuraan waxyaabo muuqaal ah daboolida albamka iyo boodhadhka. Dhanka dakhliga iyo lacag bixinta, tani aad ayey uga duwan tahay, sawir qaadista ganacsiga ee qolka duugista ama dhalada cadarka.
Sawir qaade ganacsi ayaa filan kara inuu helo ku dhawaad ​​$100,000 sanadkii. Lacagtan waxaa ku jira khidmadaha shatiga, kuwaas oo la siyo sawir qaadaha si loogu isticmaalo sawirrada ganacsi ahaan.
Ruqsad -bixintu waxay xakumaysaa sida iyo muddada sawirka la isticmaali karo, iyadoo qiimayaashu kala duwan yihiin hadba sida loo isticmaalo iyo muddada.
12. Sawirada Sawirada
Sawir -gacmeedka moodada waa goob khaas ah oo xoogga saarta soo bandhigidda dharka iyo alaabada dharka sida ugu fiican ee suurtogalka ah.
Waxay si qoto dheer ugu dhexjirtaa suuqgeynta sababta oo ah yoolka niche -kan ayaa ah in la iibiyo qaab nololeed ama fikrad la xiriirta dharka si loo kordhiyo iibka.
Sawir qaadayaasha moodada ah waxay had iyo jeer ka iibiyaan alaabta qof kasta oo arka sawirka.
Sawirqaadaha moodada ayaa filan kara inuu kasbado qiyaastii $ 21 saacaddii.
Akhri: Sida Loo Bilaabo Meherad Sawir Qaadasho 2022
13. Sawirada Guryaha
Sawir qaadayaasha guryaha waxay gacan ka geystaan ​​suuqyada guryaha iyo kirooyinka iyaga oo saliidda ku mariya geesaha sawirro qurux badan oo dadka ku sasaba inay wax iibsadaan.
Waa wax aan macquul aheyn in laga fogaado in la shaqaaleeyo sawir qaade hanti-ma-guurto ah, sidaa darteed sawir-qaadayaashaani waxay leeyihiin faa iidooyin gaar ah oo duurka ku jira-gaar ahaan maadaama sawir-qaadistooda loo arko inay ka yar tahay raaxo iyo baahi badan!
Qiimaha saacadlaha ah ee sawir qaadaha hantida maguurtada ah badanaa waa qiyaastii $ 29 saacaddii.
14. Sawir sawir leh
Sawirqaadayaasha sawir qaadayaasha waxay u badan tahay inay baahi weyn u qabaan muddo aan xad lahayn. Macaamiishaada suurtagalka ah waxay runtii ku jiraan qof kasta iyo wax kasta - xitaa xayawaanka rabaayada ah!
Dadku waxay helayaan sawiro si ay u xusaan dhacdooyin nololeed oo gaar ah (sida sawirada sare ee dugsiga sare), si ay u xusaan qoyska (sida sawirada qoyska), si ay ugu dabaaldegaan marxaladaha jacaylka (sida sawirada ka qaybgalka), iyo inay qaataan sawiro xirfad leh oo shaqo ah ( madax-xanuun).
Mushaharka sanadlaha ah ee sawir qaadaha sawirku caadi ahaan waa qiyaastii $ 43,000.
15. Muuqaalka Muuqaalka/Dabeecadda
Sawir-qaadista muuqaal-muuqaalku waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu habboon sawir-qaadista. Fikradda ah in aan si fudud u wareegno, diiwaan-gelinno safarradeenna, iyo sawir-qaadista adduunku waa mid soo jiidasho leh.
Ficil ahaan, waa niche sawir qaadasho oo adag in la jebiyo.
Waxaa jira dhowr waddo oo aad qaadi karto si aad u noqoto sawir qaade muuqaal xirfadeed ahaan - kuwaas oo dhamaantood u baahan dadaal badan iyo xitaa nasiib.
Sawirqaadaha dabeecadda wuxuu filan karaa inuu kasbado qiyaastii $ 40,000 sanadkii.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan shaqooyinka sawir qaadista ee ugu mushaarka badan
Waa maxay mushaharka sawir qaadaha ee ugu mushaharka badan?
Mushaharka sawir qaadaha waxaa lagu go'aamiyaa arrimo ay ka mid yihiin goobta, heerka xirfadda, waayo -aragnimada, iyo xitaa xirfadaha suuqgeynta iyo ganacsiga. Sida laga soo xigtay ZipRecruiter, mushaharka sanadlaha ah wuxuu ka koobnaan karaa $ 102,000 ilaa $ 14,000.
Waa maxay shaqada sawir qaadista ee ugu mushaarka badan?
Waxaa jira shaqooyin badan oo sawir qaadis ah oo aad ka heli karto lacag badan. Sawir-qaadista arooska, sawir-qaadista ganacsiga, sawir-qaadista alaabta, iyo wixii la mid ah ayaa ah dhawr tusaale. Shaqooyinka sawir-qaadista ee ugu mushaharka badan waxaa sidoo kale lagu go'aamiyaa arrimo kala duwan.
Sideen wax badan uga dhigi karaa sawir -qaade ahaan?
Sawirrada meheradaha yaryar, baro sawir -qaadista, iibiya nuqullada dijitaalka ah ama daabacan ee shaqadaada, ku iibiya sawirradaada shabakadaha saamiyada, bilaw blog -ga sawir -qaadista, maal -geliya farshaxankaaga, hoggaamiya safarrada sawir -qaadista iyo aqoon -is -weydaarsiyada, oo noqo guru warbaahinta bulshada. iwm
Intee in le'eg ayaan ka qaadayaa sawir qaadista?
Sawir qaadayaasha xirfadda leh ayaa sida caadiga ah ka qaata inta u dhaxaysa $ 100 illaa $ 250 saacaddii ama inta u dhexaysa $ 25 iyo $ 100 halkii sawir ee la diyaarshay. Heerarka maalinta ee xafladaha dhalashada waxay u dhexeeyaan $ 300 illaa $ 500, aroosyaduna waxay u dhexeeyaan $ 1,000 illaa $ 3,000 maalintii.
Waa noocee sawir -qaadistu aadka loo dalbado?
Muuqaalka dhulka, dhismaha, duurjoogta, iyo sawir-qaadista sawirku waxay ka mid yihiin shaqooyinka ugu mushaharka badan sawir qaadayaasha.
Haddii sawir qaadistu tahay rabitaankaaga, waxaad si ammaan ah ugu beddeli kartaa il dakhli. Waxa kaliya oo ay qaadataa waa shaqo adag iyo rabitaan joogto ah oo lagu hormarinayo xirfadahaaga. Ha iloobin inaad siyaabo kala duwan u suuqgeyso naftaada iyo xirfadahaaga.
Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno waayo -aragnimadaada adduunka sawir -qaadista.
50 Fikradaha Ganacsi Yaryar ee Ugu Fiican Oo Aad Hadda Bilaabi Karto
10 Dahabka Ugu Qaalisan Adduunka 2022
Daqiiqad 15 akhri
20 Qofka Ugu Mushaarka Badan TV -ga | 2021
Soo-jeediyaha telefishinka (sidoo kale loo yaqaan shakhsiyadda telefishinka ama martigeliyaha taleefishinka) waa qofka soo bandhiga…
Bangiyada ugu Fiican Magaalada Kansas Sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Ku haysashada lacagtaada mid ka mid ah bangiyada ugu fiican magaalada Kansas waxay bixisaa dulsaar wanaagsan, xulashooyinka maalgashiga,…
Si aan xitaa mowduuca u soo bandhigno, dab-demiska mutadawiciinta ah ma helaan lacag, waxaan u baahanahay inaan aqoonsanno muhiimada…
Sida Loo Codsado Medicaid gudaha Virginia
Maalgelinta Medicaid, oo xisaabisa shan-meelood meel kharashka daryeelka caafimaadka, waa isha ugu weyn ee taageerada isbitaallada iyo…
40 Xigasho Awood Leh Oo Ku Saabsan Guusha Sanadka 2022
Ma ogtahay in Thomas Edinson uu isku dayay 1000 tijaabo oo fashilmay? Maya, malaha ma ogid taas maxaa yeelay…